काठमाडाैंमा धमाधम सवारी निषेश गरिदै, कहाँ कहाँ गरियो ? हेर्नुहोस् – Malika News
काठमाडाैंमा धमाधम सवारी निषेश गरिदै, कहाँ कहाँ गरियो ? हेर्नुहोस्
October 25, 2017 admin0
काठमाडाैं । काठमाडौंको अत्यधिक व्यस्त स्थानका रुपमा रहेका असन क्षेत्रलाई पनि सवारी साधन निषेध क्षेत्र बनाइने भएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र त्यस क्षेत्रमा रहेका वडाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीको सहभागितामा असन क्षेत्रलाई पनि सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । त्यसका लागि महाशाखाले महानगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीसँग छलफलसमेत शुरु गरेको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौँ महानगरपालिका र ठमेल क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यवसायी संघ संस्थाको सक्रियतामा कात्तिक ५ गतेदेखि ठमेल क्षेत्रलाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान शुरु गरिएको थियो ।
महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले ठमेल क्षेत्रमा चलाइएको अभियान केही हदसम्म सफल भएपछि असन क्षेत्रलाई पनि ठमेल क्षेत्रजस्तो बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘ठमेल क्षेत्रमा हुँदै आएको अव्यवस्थित सवारीलाई कडाइ गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आवतजावतमा सजिलो भएको छ’– प्रमुख खनालले भने ।
ठमेल क्षेत्रको अव्यवस्थित सवारी आगमनलाई कडाइ गरेपछि सुरक्षा, पर्यटक, एम्बुलेन्स, दमकलगायतका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।
ठमेल क्षेत्रभित्र घर भएका घरधनी र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई ठमेलभित्र भित्रिनका लागि प्रवेश पास वितरण गर्ने कामसमेत शुरु भएको छ ।
दाेस्राेपटक निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाड सूरु गर्यो बामगठबन्धनले, कुन जिल्लामा सिट हेर्नुहोस ?
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा ४ लाखले भोट हाल्न नपाउने, को को परे हेर्नुहोस्
साँफेबगर विमानस्थलः १६ बर्षपछि सञ्चालन ल्याउन थालियाे काम
November 16, 2017 malika news
खुकुरी प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु
November 19, 2017 malika news
मदिराका कारण महिला घरमा बस्न पाएनन्
December 4, 2017 malika news